Yarra Council - Services for Families and Children Somali
You are here: Home > Services > Services for Families and Children Somali Print Page
Services for Families and Children Somali
Adeegyada Qoysaska iyo Carruurta
services for families and children1.pdf (24.94 KB)
Golaha Degmada Yarra wuxuu ku bixiyaa qiyaas ahaan $3 milyan sanad walba taas oo uu ku kaalmeeyo adeegyada qoyska iyo carruurta.
Adeegyadaasna waxaa ka mid ah:
Daryeelka maalinta oo dhanAdeegaan waxaa loogu talagalay ilma dhashay ilaa lix sano jir. Carruurta ayaa lagu hayaa maalinta oo dhan xarumahaas mid ka mid ah hawshana waxaa waxaa qabta dad aqoonteeda leh.
Dugsiga ka hor ama kindergarten-kaAdeegaan waxaa la siiyaa carruurta yaryar oo jirta da’da afar sano si looga caawimo diyaarinta ka hor inta aanay gaarin dugsiga hoose.
Daryeelka dugsiga ka dibDaryeelka dugsiga ka dib waa carruurta da’da dugsiga hoose. Waxayna leedahay xarakaadyo badan oo loo qabanqaabiyo caruurta dugsiga ka dib.
Daryeelka fasaxaDaryeelka fasaxa wuxuu ku lug leeyahay shaqaalaha Golaha degmada oo qabanqaabiya islma markaana socodsiiya munaasabada kala duwan iyo xarakaadyo ardada dugsiga hoose inta lagu jiro fasaxyada dugsiga.
Daryeel marmar ahDaryeelka marmarka ahi waa markaad ilmahaaga ku dejiso xarunta si laguugu hayo. Maaha inaad samaysato balan si aad adeegaan u hesho. Daryeelkaan marmarka ah ee Yarra waxaa lagu qabtaa saddex xarumood oo madadaalo kuwaas oo ku kala Richmond, Collingwood iyo goobta dabaasha ee Fitzroy.
Kooxaha wada cayaaraKooxaha wada cayaara ee bulshadu waa marka carruurta ka yar da’da dugsiga iyo waalidiinta ama daryeelayaashu ay isu yimaadaan kuna wada cayaaraan iskuna dhexgalaan rugaha bulshada ee Yarra.
Daryeel maalmeedka qoyskaAdeegaan waxaa lug ku leh carruurta la geeyo guriga qofka daryeellayaa gaarka u leeyahay. Daryeellayahaas waxaa taageera koox xiriiriyayaal ah oo awoodgeliya.
Caafimaadka ilmaha iyo hooyadaWaxaa jira adeeg ay helli karaan waalidiinta, kuwaas oo ku nool, ka shaqeeya waxna ka barta agagaaraha lehna carruur yaryar iyo kuwa gaarsiisan da’da lixda sano. Waalidiintu waxay helli karaan talo iyo caawimo.
Adeega dhalinyaradaAdeegani wuxuu siiyaa xarakaadyo iyo barnaamijyo dhalinta jirta 12 iyo 25 sanadood.
Ka-talasiinta DhaqaalahaGoluhu wuxuu bixiyaa adeeg kaalmo iyo adeega ka-talasiinta qalalaasaha dhaqaalaha ee u baahan caawimada.
Adeegyada qoyskaGoluhu wuxuu siiyaa talasiinta, taageero iyo barnaamijyo xanaanayn qoysaska da’doodu u dhexayso eber (0) ilaa 18 sanadood.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah adeegyada, kharajka, iyo sida loogu qoro ilmahaaga xarunta fadlan wac Golaha 9205 5441 ama booqo www.yarracity.vic.gov.au/services. Waxaad kaloo la hadli kartaa qof afkaaga ku hadlaya adigoo wacaya adeega turjubaanka golaha 9280 1940.